Maxaad ku noqon kartaa Nin Romantic -Talo ku anfacaysa - Hablaha Media Network
Maxaad ku noqon kartaa Nin Romantic -Talo ku anfacaysa
HMN:- Kaga farxi marmar xaaskaaga inaad banaanka ka soo cuntaysiiso, hadii ayna jeclayn taas banaanka u kexee oo gee suuqyada iyo meelaha ay ka hesho xasuusana in jeeb kaagu uuna madhnaan.
Marka aad fasax tihiin labadiinuba filan waa usamee tusaale: inaad aroortii ka hor toosto oo aad u samayso quraac ay jeceshahay, kadibna si qurux badan intaad u diyaariso sariirta ugu gee adigoo ereyo naxariisleh u raacinaya.
Barkinta hoosteeda ama khaanada ay ku gurato dharka u gali shukulaato nooca ay jeceshahay, kadibna waxaad dusha kaga dhajisaa waraaq ay ku qoran tahay ereyo jacayl sida: waxaad ka macaan tahay shukulaatadan iwm.
Ha iloobin maalin kasta inaad u qorto SMS gaaban oo aad ugu cabirayso sidad u jeceshahay.
Marmar usoo dir waraaq ama postcard aad ugu soo dirayso adareeska guriga, xasuuso waraaqda waxaad u diraysaa gabadhii aad jeclaatay ee aad noloshaada maalmaha u macaan la qaadatay. Ogow in dumarku ay jecel yihiin filan waaga sida oo kale ah.
Sanadkii hal maalin aad adigu ogtahay udiyaari sidii aad xaaskaaga uga dhigi lahayd boqorada ugu qaalisan aduunka. Qaabka aad boqorada ula dhaqmayso adaa og.
Usoo iibi xaaskaaga dharka hoosta laga xidho adoo dookhaaga usoo qaadaya, kadibna sidii hadiyad ugu keen.
Marka ay umusha ka baxdo kadib ku caawi xaaskaagu sidii ay isooga ridi lahayd kg-ka ku siyaaday, adigoo ayna kaa ahayn hadal kaliya laakiin hadal iyo ficilba ku caawinaya.
Waxyaabaha ay xaaskaagu kugu jeclaan ee ayna kugu iloobayn waxaa kamida inaad ka caawiso shaqada guriga iyadoon kuu dirin iyadu, noqo nin is dira oo dareema goorta ay u baahan tahay gacan kale.
Noqo nin gurigiisu waxa uu ubaahan yahay og, haku eegan xaaskaaga oo meel sii saaran sida: inay daah xidhayso, nalka badalayso iwm.
Marna haka yeelin naftaadu inay u aragto wax caadiya in nin qayrkaa ah ay ugu yeedho xaaskaagu marka ay wax ka xumaadaan sida:
saxanka tvga, guriga oo la rinjiyeeyo iwm. Wixii aad qaban karto qabo adigu wixii aadan awoodina adigu ugu yeedh qofkale halka ay xaaskaagu iyadu isu xil saartay.
Marka ay xaaskaagu cuntada samaynayso noqo mid jikada la taagan. Usheekee inta ay wax karinayso oo ra’yigaaga kasii cuntada, u dhadhami kolba adoo ciyaar kalgacalna la ciyaaraya.
Caado ka dhigo inaad reerkaaga la cuntayso ugu yaraan 2jeer maalintii, reerka oo meel wax ku wada cunaa waxay keentaa in reerkaasi noqdo reer iska war haya oo is jecel. Si kastooy shaqadaadu u badan tahay saacadaa aad reerkaaga la cuntaynaysaa hakuu ahaato saacad lama dhaafaan ah.
Isu qurxi xaaskaaga adoo xidhanaya labiska ay kugu jeceshahay.